War saxaafadeed – Shirka Garowe oo maalintii saddexaad galay iyo wefdi uu hogaaminayo M/weyne Shariif oo ka qayb galaya. – Radio Daljir
War saxaafadeed – Shirka Garowe oo maalintii saddexaad galay iyo wefdi uu hogaaminayo M/weyne Shariif oo ka qayb galaya.
Febraayo 17, 2012 12:00 b 0
Xafiiska Ra?iisul Wasaaraha
Ref: XRW/OM/PR 00134/02/12
Garowe, Feb 17 – Shirka Wadatashiga Dastuurka Soomaaliya ee ka soconaya magaalada Garowe ee xarunta Puntland ayaa galay maalintiisii saddexaad iyada oo maantana ay soo gaareen madasha shirka wefdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed iyaga oo loo sameeyay munaasabada qado ah oo ay isku arkeen madaxda kale ee shirka.
Shirka ayaa waxaa maanta diirada lagu saarayay sidii la isku waafajin lahaa talooyinka ay soo jeediyeen qeybihii saddexda ahaa ee shalay ergooyinka loo qeybiyay, waxaana illaa iyo haatan soconaya wadatashiyada iyo sidii loo qaadan lahaa hal fikrad ama heykal dowladeed taasoo ay noqon doonto sharciga iyo qaanuunka hagi doona dowladda soo socota kadib dhamaadka xilliga kumeel gaarka ah ee dowladda haatan jirta.
Gabagabada shirka ayaa la filayaa inay ka soo baxaan natiijo wanaagsan halkaasoo ay wakiilada iyo madaxda dhinacyada Soomaaliduna soo saari doonaan go’aamo kama dambays ah (Final Communiqu?), waxayna wada saxiixi doonaan Axdiga Garowe ( Garowe Principles II).
[email protected] Mogadishu, Somalia
Baahin: Sabti, Feb 18, C/risaaq C. Silfar ~ Daljir ~ Galkacyo. Afar qodob oo muhiim ah oo lagu heshiiyey shirweynaha dastuurka Somaliya ee Garowe II; Falcelis ku saabsan heshiiska Garowe II; Maxkamada ciidanka qalabka sida ee Somaliya oo dil ku filay askari ka tirsanaa ciidamada.
Baahin: Khamiis, Feb 16, Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. R/wasaare Gaas oo ugu baaqay madaxda shirka Garowe II dhamaystirka dastuurka & dib u habaynta baarlamaanka; Ganacsatada oo dhib kala kulanta wadada isku xirta Bossaso & Laasqoray oo burbursan, caqabadna ku ah ganacsiga; Mudanayaal ka tirsan dawlada federaalka oo ku baaqay in dastuurka Somaliya lagu dhaqan geliyo afti shacab.